“အမှန်တရား မြတ်နိုးသူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “အမှန်တရား မြတ်နိုးသူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်”
“အမှန်တရား မြတ်နိုးသူတွေကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်”
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jun 22, 2013 in Creative Writing | 47 comments
ကျုပ်တို့ တွေးတတ်ကာစ ကတည်းက ကမ္ဘာကြီး ပြားတယ်၊ လုံးတယ် ဆိုတာနဲ့ စပြီး ပြဿနာ တက်ခဲ့ကြတယ်။ စာထဲမှာ သင်ရတာက ကမ္ဘာကြီးဟာ လုံးဝန်းတယ်။ ကျုပ်တို့ မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ တွေ့နေရတာက ကမ္ဘာကြီးက ပြားနေတယ်။ ဒီလို လုံးတယ်၊ ပြားတယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျုပ် ငယ်ရွယ်စဉ်က စာသင်ကျောင်းမှာ ငလုံး၊ ငပြား ဇာတ်လမ်းတောင် ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်။ (ကွန်မန့် 200 – ရရင် ပြောပြမယ်။)
အဓိက ကျုပ် ဆိုလိုချင်တာကတော့ လူတွေဟာ တွေးတတ်လာကတည်းက ပြဿနာနဲ့ တည့်တည့် တိုးတာပဲ။ အတွေး ဆိုတာ ဝင်လာ ကတည်းက ဒွိဟ သံသယနဲ့ စိတ်တွေဟာ ညစ်ထေးလာတယ်။ အတွေး ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ တချို့က အတွေးကို ရေရှည်ဆွဲမဆန့်ဘူး။ ကိုယ့်အတွေးကို သူများကို ပြောပြတယ်။ အဲ့ဒီ သူများက ဟုတ်သည်ရှိ၊ မဟုတ်သည် ရှိ။ အဲ့ဒါက ဒီလိုကွာ … လို့ .. ပြောလိုက်တာနဲ့ ဟုတ်ဟုတ်၊ မဟုတ်ဟုတ်၊ ဟုတ်တယ်ဆိုပြီး လက်ခံလိုက်တယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဒီအတွေးတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းလင်းသွားတယ်။
အချို့လူများကျပြန်တော့ ဒီလို မဟုတ်ပြန်ဘူး။ ကိုယ့်အတွေးကို သူများကို ချပြတယ်။ စာတွေ လိုက်ဖတ်တယ်။ ထပ်ပြီး တွေးတောတယ်။ ထပ်ပြီး ထပ်ပြီးတော့ တွေးတောတယ်။ သူ့လောက် မသိတဲ့ လူတွေ ကြားထဲမှာတော့ ဒီအတွေးတွေ လျောက်ပြောပြီး ဆရာကြီး ဝင်လုပ်တယ်။ တကယ်တမ်း ပြောရရင် ဒီလိုလူမျိုးတွေကို အတွေးသံသရာထဲ ချာချာလည်နေတဲ့ သနားစဖွယ် လူသားလို့ သတ်မှတ်သင့်တယ်။ အတွေးတွေ၊ ဒီအတွေးတွေက ဆင့်ပွားလာတာတွေကို ဒွိဟ သံသယနဲ့ လိုက်ကြည့်ရင်း ဒီလို လူမျိုးတွေရဲ့ စိတ်ဟာ ညစ်ထေးနေ၊ ပင်ပန်းနေရတတ်တယ်။ ဒီလိုမျိုး မဖြစ်အောင် ရှောင်ကြရမယ်။
လောကကြီးရဲ့ အကိုးကွယ်ခံရမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာ အတွေးတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေး၊ ညစ်ပေ၊ ပင်ပန်း မနေရဘူး။ အမြဲတမ်း ရှင်းလင်း၊ ငြိမ်းအေးနေရမယ်။ ဒီတော့ အတွေးတစ်ခု ဝင်လာပြီဆိုရင် မေး၊ ဖြေတဲ့လူက အိယောင်ဝါး ဖြေဖြေ၊ အတည်ပဲ ဖြေဖြေ၊ ဖြေတဲ့အတိုင်း လက်ခံလိုက်၊ ပြီးရင် အဲ့ဒီ အတွေးကို ထုတ်ပစ်လိုက်။ စိတ်ကို ဟာလာဟင်းလင်း ထားကြ။ အတွေး ဝင်လာတုန်း နီးနီးနားနား မေးစရာ ဘယ်သူမှ မရှိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကိုယ်ပွားတစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး မေး။ ပြီးရင် အဖြေကို လက်ခံပြီး အတွေးကို ထုတ်ပစ်လိုက်။ ဒါမှသာ ညစ်ထေးမှု မရှိဘဲ အစဉ်ငြိမ်းချမ်းနေမှာပါ။
အထက်က ကျုပ် ပြောခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကို သနားစဖွယ် လူသားတွေက ဝေဖန်ကြလိမ့်မယ်။ ဒီအခါမှာ ခွင့်လွတ်တတ်ကြရမယ်။ ဒီလို ခွင့်လွတ်တတ်ဖို့ အတွက် နားနှစ်ဖက် ပေးထားတယ်။ မျက်စိ နှစ်လုံး ပေးထားတယ်။ အသံနဲ့ ဝေဖန်ရင် ဒီဘက် နားက ဝင်ပြီး ဟိုဘက်နားက ထုတ်ပစ်ကြရမယ်။ မျက်စိနဲ့ မြင်ရင် မျက်စိ တစ်ဖက်က မြင်ပြီး မျက်စိ တစ်ဖက်က ထုတ်ပစ်ကြရမယ်။ ဝင်လာသမျှ ထွက်ကြရခြင်းဟာ အခြေခံ အကျဆုံး၊ အရိုးရှင်းဆုံး အမှန်တရား တစ်ခုပဲ။
ကျုပ်တို့ မွေးလာတော့ ဘယ်လို မွေးလာကြလဲ။ ကိုယ်တုံးလုံး မွေးလာကြတယ်။ အဝတ် မပါဘူး။ ဒါကို ငြင်းနိုင်လား။ မငြင်းနိုင်ဘူး။ ဒါ ဘာကို ပြတာလဲဆိုရင် အရိုးရှင်းဆုံး အမှန်တရားကို ပြပေးတာ။ ဒါကို သနားစဖွယ် အမျိုးတွေက အဝတ်အထည်တွေနဲ့ ချည်ထုပ်ကြတယ်။ ဖုံးကွယ်ကြတယ်။ ဒါ အမှန်တရား ကွယ်အောင် လုပ်နေကြတာ။ အမှန်တရားကို ရင်မဆိုင်ရဲကြဘူး။ သတ္တိနည်းတဲ့ လူစားမျိုးလို့လည်း ပြောလို့ ရနိုင်တယ်။ ပြောရရင်တော့ အရှည်ကြီးပဲ။
“…. အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူ ဖြစ်လိုရင် အဝတ် မဝတ်ရဘူး။ ဒီအတိုင်း ကိုယ်တုံးလုံး နေကြရမယ်။ ….”
ဒီအမှန်တရားကို လက်ခံတယ်ဆိုရင် ကျုပ်ဆီကို အချိန်မရွေး လာနိုင်တယ်။ ဒီထက် မှန်ကန်သော ကျင့်စဉ်များလည်း ရှိတယ်။ ဒီကျင့်စဉ်တွေ ကျင့်ဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး အခြေခံ အကျဆုံး၊ အရိုးရှင်းဆုံး၊ အဖြူစင်ဆုံးသော တုံးလုံးကျင့်စဉ်နဲ့ စတင်ရမယ်။
​ပြော — လိတ်​စာ
ထွက်​​ပြေးလို့က​တော့ မိုး​မြေအဆုံး လိုက်​ရှာမယ်​​ဟေ့
ခရီးသည်ကြီး ဆိုတဲ့ အမည်အရ
အသင်ဟာ ခရီးသွားနေသူသာ ဖြစ်ပေမည်။
(နာမည်နှင့် ပတ်သက်၍ အတွေးတွေ ဖြူစင်သွားပြီ)
ဇမ္ဗူဆုံးတဲ့ အရပ်ဟာ ကျုပ်ရဲ့ နေရာပါ။
ကျုပ်ဆီမှာ ဖြူစင်သော ကျင့်စဉ်များ ရှိနေပေသည်။
အသင်ကား အမှန်တရား မြတ်နိုးသူ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ဝမ်းသာမိ၏။
– တုံးလုံးဆရာကျော် ရှင်ကြီးအံ
လှိုင်​သာယာ ၃ထိတ်​က ​ကောင်​မ​လေး​တွေပါ​ခေါ်ခဲ့မယ်​ ဟင်း ဟင်း
ညည အိုက်​ဒီကျင့်​စဉ်​ ကျင်​​နေတာ တဲ့
သူတော်ချင်း သတင်းလွေ့လွေ့ ဆိုသကဲ့သို့
အမှန်တရား မြတ်နိုးသူ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံခြင်းကား
ကောင်းပေစွ .. ကောင်းပေစွ တကား ….
အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူ ဖြစ်လိုရင် အဝတ် မဝတ်ရဘူး။ ဒီအတိုင်း ကိုယ်တုံးလုံး နေကြရမယ်
မဟာရာဇာဂျီး ယခုလို အယူဝါဒတွေ ကျင့်စဉ်တွေကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ပါက
နောက်လိုက်နောက်ပါ တပည့်သား/မယာပါသားများ လွန်စွာပေါးများပြီးးးးးးးးးး
ဇဗူဒီပါ လက်ဝဲ အနောက်မြောက်ကြွင်း နှိုက် ထင်ရှားလတ္တံ့………….
မဟာရာဇာဂျီးက အ၀တ်မ၀တ်ပဲ ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးပါတင်လိုက်ရင်
အသင် သခင် mobile ဟာ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူလား ?
မြတ်နိုးသူဆိုရင် ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် …
အသင့် ဘေးက ပုံကို ကြည့်ရတာဖြင့်
အသင်ဟာ ယခုအထိ အမှန်တရား မြတ်နိုးသူ မဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားနေပေတယ်။
ကိုယ် တုံလုံး ကြီး နဲ့ ဆို ရင် တော့
ကိုယ့်အမှန် တရား ကို
ကိုယ် ပြန် မကြည့် ရဲဘူးကွယ် ။
ရှက်ကိုး ရှက်ကန်း အမှန်တရား ကြီး ဆိုတော့
မြတ်နိုးစရာ ဆိုတာ ထက်
အရှက် သည်း စရာ ကြီး ပါကွယ် ။
ဒီ ည နေ အက် ဒိ လို အမှန်တရား နဲ့ လာ ခဲ့မယ်
တနင်္ဂနွေ နေ့ညနေ
လှည်းတန်း အနီး မှ . . . , . .
အလင်းဆက် ဆိုဒေါ့ဂါ …
အမှန်တရား အလင်းတန်းတွေ ဆက်ရမယ့် လူတစ်ယောက် ဖြစ်မယ် …
[နာမည်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အတွေးတွေ ဖြူစင်သွားပြီ]
အသင် အမှန်တရားအတွက် သတ္တိတွေ မွေးလိုက်ပါ
အကယ်၍ အမှန်တရားအတွက် လာခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကျုပ်ဆီကို တန်းတန်းမတ်မတ်ကြီးသာ လှမ်းလို့ လာခဲ့ပါ
ကျုပ် ဆီက နောက်ထပ်နောက်ထပ် စနစ်ကျလှတဲ့ အမှန်တရားကျင့်စဉ် တွေကို ထပ်မံ ကျင့်သုံးလိုက်ပါ။
ဆုံးဖြတ် ချက်တွေ ပြီး မြောက် တော့မှ ပြန် လာမယ်
လက်ရှိ ဘွဂ လွတ် မြောက်တော့ မှ ပြန် ခဲ့မယ်
#####**** . . . . ****%%%%
မင်း ဆီ . . . တန်း လန်း ကြီး ကိုယ် ပြန် ခဲ့ ပါမယ်
မင်းဆီ တန်းတန်း ကြီး ကိုယ် လာ ခဲ့ ပါ မယ်
နောက်ထပ် ရှင်ကြီး တစ်ပါး
အသင် Mr. MarGa ဟာ
အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူလား ???
ဟုတ်ခဲ့သည်ရှိသော ကျုပ်ဆီ လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကျုပ်ဆီမှာ တုံးလုံးကျင့်စဉ်မှစ အမှန်တရား ကျင့်စဉ်များစွာ ရှိပေတယ်။
အတွေးတွေနဲ့ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွေးသမားတွေဆိုတာက အဆင့်တစ်ခုမှာ ညင်သာစွာပြောင်းလဲတိုးတက်နေတာပါ…အဲဒီအဆင့်မရောက်ပဲ…ရင့်ကျက်တဲ့အတွေးအခေါ် အဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ပါဘူး…..။ အဲဒီအဆင့်က အလွန်ကိုအရေး ကြီးပါတယ်….ပျက်ရယ်မပြုသင့်ပါဘူး…။
ကျုပ် ကျင့်စဉ်မှာ ရင့်ကျက်မှု၊ မရင့်ကျက်မှု မရှိပေဘူး။
အမှန်တရားနဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုသာ ရှိပေတယ်။
အမှန်တရား မြတ်နိုးသူတိုင်းဟာ အမှန်တရားကို လက်ခံရဲရတယ်။ ရင်ဆိုင်ရဲရတယ်။
အိုဘယ့် ကော်ဘရာ …
အသင်ကား အလွန် နှစ်သက်ဖွယ် ရှိစွတကား …
အသင်ကား အမှန်တရား မြတ်နိုးသူ ဖြစ်ချေသည်တကား …
ကောင်းလေစွ .. ကောင်းလေစွ …
ကျုပ်ထံ ခပ်မြန်မြန်သာ လှမ်းကြွခဲ့ပေတော့ ကော်ဘရာ …။
တုံးလုံးဆရာကျော် ရှင်ကြီးအံ ရေ ~~~
နောက် တုံး လုံး ကျင့် စဉ် တ မျိုး မိတ် ဆက် ပေး လိုက် မယ်
အသင်ကား မြတ်နိုးဖွယ် ရှိစွတကား
အသင် ညွှန်သော လမ်းကား သိပြီးစွတကား
မိစ္ဆာဒိဌိ ဟူသည် အဘယ်နည်း ???
မိစ္ဆာ ဟူသော စကားပါသည့် အတွက် မကောင်းခြင်းကို ညွှန်းဆိုဖွယ် ဖြစ်ချိမ့်မည်။
[ အတွေးတွေ ဖြူစင်သွားပြီ ]
အသင်ရော အမှန်တရား မြတ်နိုးသူ ဖြစ်ချင်ပါသလား။
ဖြစ်ချင်ရင် ကျုပ်ဆီမှာ ကျင့်စဉ်တွေ ရှိပါတယ်။
အို တုံးလုံးကြီးလာရင် တန်းလန်းကြီး ပြသနာရှိတယ်နော်…
အဟင့် လာရဲပေါင်အေ….. ဈေးကကောင်းကကောင်းနဲ… ညည်းအကြံနာတိဘ နာတိဘ.. ဟွင်းဟွင်း..
အံချာဒုံး လည်ဒါလောက်တော့ ပျင်းသေးတယ် ပျင်းသေးတယ် အို ပျင်းတောင် ပျင်းသေးတယ်…. ခိခိခိ…
အသင်ကား တုံးလုံးကျင့်စဉ်အား ပြဿနာဟု သတ်မှတ်သည်ကို ထောက်သဖြင့်
အသင်ကား အမှန်တရား မရှိသေးသူသာ ဖြစ်ချိမ့်မည်။
အိမ်း … ကျုပ်ထံ လာလှည့် …။
အခြေခံ အကျဆုံးသော၊ အရိုးရှင်းဆုံးသော၊ အဖြူစင်ဆုံးသော တုံးလုံးကျင့်စဉ်အား
လာရောက်၍ ကျင့်လှည့်လော့ အသင် ရွှေတိုက်စိုး …။
အမှန်တရား ဆိုဒေါ့ဂါ အမှားတစ်ရံကို ပေါတဲ့တဘောဘဲ။
နာ ဟို လူဂျီးနဲ့ မှားခဲ့ဒါချိဒယ်။
ခု နာ့ ဆီမှာ အမှားတစ်ရံဂျီးကျန်ခဲ့လို့ ပြန်လာလဲဘို့ ပြောပေးဘာ။
ခုခေတ် ကလေးမတွေ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသထက် မြတ်နိုးလာဂျဘီ။
ကေဇက် ဟူသည်ကား ကပ်စေ ဟူသတတ်။
ကျုပ်ရဲ့ တုံးလုံးကျင့်စဉ်အနား ကပ်စေ …။
ဤသည်ကား အမိန့် မဟုတ်။
အသင် ဆိုသော အမှန်တရား တစ်ခုသာ ဖြစ်ချိမ့်မည်တည်း။
လာလှည့် … ကျင့်လှည့်လော့ ….။
ဒုက္ခ .. ဒုက္ခ …
ဟုတ်၏ …. ဟုတ်၏ …
အမှန်တရား မရှိသူ၌ ဒုက္ခ မည်၏ …။
အသင် ဒုက္ခ မတချင်တော့ပါက အမှန်တရား ကျင့်စဉ်အား လာရောက် ကျင့်ကြံလှည့်တော့။
တုံးလုံး အမှန်တရား ကျင့်စဉ်အား လာရောက် ကျင့်ကြံလှည့်တော့ …။
ကြွက်ကြွက်ကယ်ညံ့ အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်ကာ ကလေးတစ်သိုက် ခွေးတစ်သိုက်နဲ့
အသင် လာချင်သလို ပုံစံမျိုးနဲ့သာ ကြွလှမ်းခဲ့ပါ။
အသင့် ရင်ထဲ အမှန်တရား ရှိနေပါက မြတ်နိုးဖွယ် ရှိစွ …
ကျုပ်ထံ ရောက်ကာမှ တုံးလုံး အမှန်တရားအား လက်တွေ့ ကျင့်ကြံပါကလည်း အခါမနှောင်းသေးပါ။
လာလှည့် .. လှမ်းခဲ့ပါ …
ကျိရဒါ..- တုံးလုံးဆရာကျော် ရှင်ကြီးအံရဲ့ မူလဆြာဂျီးက
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘု ဖြစ်ရမယ်..ဒီမနက်ပဲ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့
အဲ့ဒီ ဆရာကြီး တုံးလုံးအကျော်အမော် ရှင်ကြီးအော်ဘု ဟာ ကျုပ်ရဲ့ လက်ဦးဆရာကြီးပဲ။
သူ့ဆီက အရိုးစင်းဆုံး၊ အဖြူစင်ဆုံး တုံးလုံးကျင့်စဉ်ကို နည်းနာယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေတယ်။
အသင်ရော အမှန်တရားကို မြတ်နိုးပါသလား။
လာခဲ့၊ လှမ်းခဲ့၊ တုံးလုံးကျင့်စဉ်ကို ကျင့်လှည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကျုပ်ကတော့ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးပေမဲ့..
အမှန်တရားမြတ်နိုးပီး ကျင့်ကြံမဲ့.ရွာသူဂလေးဒွေများ ရှိရင်..
အသင်၏ ရင်တွင်း အမှန်တရား မြတ်နိုးခြင်း ရှိနေခြင်းကာ ကောင်းစွတကား …။
ထို့ထက် အသင်၏ စကားအရ
အသင်ကား ဆရာထက် ဆရာမ ထံတွင် နည်းနာ ဆည်းပူးချင်နေသည်ကို သနားငဲ့သော အားဖြင့်
လမ်းညွှန် သိလိုလျှင် လှမ်းခဲ့ပေတော့။
သြော် အံစာ အံစာ
သွားရှာခြင်း၊ မသွားရှာခြင်း တို့တွင် မ တစ်လုံးသာ အပိုပါ၏ …
အမှားဘက်မှ အမှန်တရားသို့ ကူးခြင်းသည်လည်း ဤသို့သာ ဖြစ်လေ၏ …
လှမ်းခဲ့တော့ အဆွေ ….
မ တစ်လုံးကို ဖြုတ်၍ လှမ်းခဲ့ပေတော့ ….
အင်း…ကွမ်းဖိုး ဆေးလိပ်ဖိုးနဲ့ မွဲသွားလို့ ၀တ်စရာအ၀တ်စားတောင် မရှိတော့တဲ့ ဘွကိုရောက်သွားရှာပါလား… ဘာကျင့်စဉ်မှ ရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဟိုလူ့လိုက်ခေါ် ဒီလူ့လိုက်ခေါ်ပြီး ပိုက်ဆံချေးနေတာ မသိတာမှတ်လို့….. ဖျာလိပ်ပတ်ပြီးနေပါ…ရှင်ကြီးအံ….
အသင့်အား အမှန်တရားကို မြတ်နိုးခြင်းကို ဖြစ်စေလော့ …။
အမှန်တရားအား ရင်ဆိုင်ရဲစေလော့ …။
အမှန်တရား ကျင့်လိုလျှင် ကျုပ်ထံ လှမ်းခဲ့လော့ …။
ဟွင်း..ဟွင်း..ငါလာဂဲ့ရင် နင့်ဘွ ဘိုဖစ်သွားမယ်ဆိုတာ မသိရော့လေသလား.. သေဂျီးအံ.. အဲလေ ရှင်ကြီးအံ
တရွာလုံး ဖင်ဟောင်းလောင်းဖစ်အောင် မြှူဆွယ်နေဒါ မြူဆွယ်နေဒါ…
ယင်းသို့ ဟောင်းလောင်း ဖြစ်ခြင်းကား အမှန်တရား၏ ဒုတိယမြောက် အခြေခံ အကျဆုံးလည်း ဖြစ်ပေ၏။
အသင် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးစေချင်သည်။
လှမ်းကြွလာပါက ဝမ်းသာစွာ ကြိုပါမည်။
တုံးလုံးဆရာကျော် ရှင်ကြီးအံ၊ တန်းလန်းကြီးလာရင်တော့…
အိမ်က ဒိုဘာမင်ကြီးကို ကြိုးဖြုတ်ပြီးလွှတ်လိုက်မယ်… ပြတ်စေသတည်း
အသင်၏ စကားကို ထောက်ရှုသဖြင့်
အသင်ကား အမှန်တရားအား ပြက်ရယ်ပြုသူ ဖြစ်ပေမည်။
အမှန်တရား၏ အနှစ်သာရအား သိနိုင်စေရန်
ရေငုပ် တုံးခုန် မီးလှုံ
အဲဒါတွေ ကော ကျင့်ရဦးမှာလား ဟင်
ရေငုပ် တုံးခုန် မီးလှုံခြင်းများ မပါပေ။
လွှတ်ပွဲ၊ မလွှတ်ပွဲ များ အကြောင်း သိလိုပေက
ကျုပ်ရဲ့ တဗျည့်ကျော် တုံးလုံးဆရာငယ် ပေမောင် ထံတွင် မေးမြန်းနိုင်ပေသည်။
လူခန္တာကို တုံးလုံးလုပ်ခိုင်းတာထက်စာရင်.. ဦးနှောက်အတွေးအခေါ်တွေကို.. “၀တ်လစ်စလစ်”လုပ်ခိုင်းတာက… ပိုဆိုးပါတယ်ကွယ်…
သံသရာ မှောက်တာကို ကြောက်ဖို့ဆိုတာ
ဝေလာဝေးပါသေးတယ် သဂျီးရယ် …
ဆရာခင်ဗျား… ကျွန်တော်က ခုမှ ဒီရွာထဲဝင်လာသူမို့ မြင်သမျှအသစ်အဆန်းဖြစ်နေပါတယ်။ ရွာထဲက လမ်းတွေတောင် သေချာမသိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် comment မိတာမှာ အမှားတွေရှိရင် အားလုံးက ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ ဦးစွာတောင်းပန်ပါတယ်။ ဆရာ့ post က creative writing အနေနဲ့ အရမ်းကို ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ တုံးလုံးကိစ္စကလည်း ဒီသဘောမျိုး art of writing တစ်ခုလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ဆရာပြောထားသလိုမျိုးပဲ တကယ်သဘောထားကျင့်သုံးဖို့ ရည်ညွှန်းပါသလား။ ရိုးရိုးသားသားမေးတာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ Zen ကျင့်စဉ်ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေလိုမျိုး ခံစားမိလို့ပါ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကို ရှာဖွေနေမိသူမို့ ဘာသာအယူဝါဒ အမျိုးမျိုး ကျင့်စဉ်အမျိုးမျိုးကို လေ့လာမိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ Zen အယူဝါဒဟာ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရနိုင်တဲ့လမ်း မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆမိလို့ပါ။ ဆရာတို့ရဲ့ အရင့်အရင်က Post တွေကိုလည်း တတ်အားသလောက် အကုန်ပြန်ဖတ်လေ့လာပါဦးမယ် ခင်ဗျာ…
ကျုပ်က ဆြာ မဟုတ်ပါဘူး ခညာ …
ပို့စ်ကလည်း ပေါက်ကရ ရေးထားတာရယ်ပါ …
(ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်ရတာ အင်မတန် ပီတိဖြစ်စရာကြီး)
ဒီ ကွာစိ ဆိုတဲ့ နံမယ်ကိုလည်း ကြားဖူး .. အဲ .. မြင်ဖူးပါတယ် ..
ခုလို လာအားပေးတာ ကျေးဇူးဘာ ခီညာ …
ဟိုမင်းသားလေး လာကျင့်မယ် ဆိုတော့ သူပဲ ရဲကို ဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်…..